श्रीमान विदेशमा, श्रीमती नेपालमा गर्भवती ! अन्तिममा यसरी खुल्यो पोल – Life Nepali
श्रीमान विदेशमा, श्रीमती नेपालमा गर्भवती ! अन्तिममा यसरी खुल्यो पोल
कैलालीको लम्कीमा श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि घरमा श्रीमती गर्भवती भएको रहस्य खुलेको हो।,भाउजु आमा समान हुन्’ भन्ने भनाईलाई कैलालीका एक युवाले मिथ्या सावित गरेका छन्। आमालाई जस्तो सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नै भाउजुलाई ग’र्भवती बनाएर ती युवाले यस्तो ह’र्कत देखाएका हुन्। प्राप्त जानकारी अनुशार कैलालीको लम्कीमा एक १८ वर्षीय देवरले भाउजुलाई ग’र्भवती बनाएका हुन्। **** ** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
दाजु विदेश गएको मौका पारी भाउजुसँग स’ल्किएका ती देबरले एक छोरीकी आमालाई ग’र्भवती बनाएका हुन्। श्रीमान विदेश गएको एक वर्ष पछि ती महिला ग’र्भवती भएकी थिइन्। गर्भवती भएकी ती महिलाले ला’जै पचाएर ससुरालाई पे’ट सु’नियो भनी झु’ट्टो बोलेर उपचारको बाहनामा अस्पताल गएपछि ग’र्भवती भएको रहस्य खुलेको हो। उनका श्रीमान् रोजगारीको सिलसिलामा मलेशीया छन्।
श्रीमान् नभएको मौकामा ती महिलाले कान्छा ससुराका कान्छा छोरा देवरसँग ल’सपस गरेकी थिइन्। महिलाले देवकोटाकै ग’र्भ रहेको स्वीकार गरेपछि ससुराले बुहारीलाई घरमा नराख्ने बताएका छन्। ती महिलाले देवरलाई घरमै बोलाएर यौ-न स’म्बन्ध राख्ने गरेको पनि स्वीकार गरेकी छिन । यौ’न स’म्र्पक गर्ने देवर भने भारतमा रोजगारी गर्दै आएका छन्। पारिवारिक स्रोतका अनुसार देवरले आफुलाई भाउजुले जवरजस्ती यौ-न सम्पर्क गर्न लगाएको बताएका छन्। ‘केटीएमनेपालबाट साभार
Previous १८ बर्षका दे’वरलाई लु’कीलु’की काे’ठामै बाे’लाउने गर्थिन ! तर अ’न्तिममा यसरी खु’ल्यो पो’ल !
Next दाई ना’ता पर्ने यु’वकले, १९ वर्षीया युवतीलाई ग’र्भवती बनाए’पछि’